မြန်မာ့ရေကြောင်းငွေကြယ်ပွင့်တွေ တကယ်လင်းစေဖို့ ~ MSU Portal
ဟိုတစ်လောလောက်က .. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကနေ အဆိုတော်ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ အင်တာဗျူးလေးကို လာပြပြီး မင်းတစ်ခုခုပြောပါလား ဆိုတော့ …. တွေ့တွေ့ချင်းဒေါသထွက်သွားတာနဲ့ … ဆောင်းပါးတိုတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်မိတယ်…. အချိန်နည်းနည်းကြာလာတာနဲ့ အမျှ တကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ သူပြောတာ မမှားဘူးဆိုတာလေးမြင်လာတယ်…. အမှားဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာ …. အကုန်မှန်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူး … ကျွန်တော်ပြောချင်တာက .. သူ့အနေနဲ့ သူသိသလောက်… မြင်သလောက်ကိုပဲဝေဖန်တာမို့ ပါ….
ကိုဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ စကားအရတော့ … ခြောက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် တစ်ယောက် သဘောင်္လိုင်းထဲရောက်သွားတာဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှု တစ်ခုလို့ ဆိုထားပါတယ်…. တကယ်တော့လည်း အခုလက်ရှိအခြေ အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ …. သူပြောတာ မှန်နေတာပေါ့လေ…
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ က ဥာဏ်ကြီးရှင်လေးတွေကို ရေကြောင်းလောကထဲမှာ မထားသင့်တော့ဘူးတဲ့လား …. မြန်မာ့ရေကြောင်းလောကမှာ ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေ မလိုအပ်ဘူးလား …
ကမ္ဘာရေကြောင်းလောကမှာရောဥာဏ်ကြီးရှင်တွေ မရှိသင့်ဘူးလား …..
ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပြောတဲ့ စကားကိုပဲပြန်ပြောပါ့မယ်…. ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးရဲ့ ၇၀ % ခိုင်နှုန်းဟာ .. ရေကြောင်းကိုသာအမှီပြုနေရတာပါ…..နောက်တစ်ချက်ကတော့ .. ရေကြောင်းပညာရပ်ဟာ ဒေါက်တာဘွဲအထိယူနိုင်တဲ့ ပညာဆိုတာ မသိသေးသူများလည်းရှိနေပါသေးတယ်… ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ လို အချက်အချာ ကျလှတဲ့ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု ရှည်လျားလှတော့ ကမ်းရိုးတမ်းများနဲ့ မြိတ်ကျွန်းစုလို ပင်လယ်သဘာဝ အလှများစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ … ရေကြောင်းပညာရှင်များစွာလိုအပ်ပါတယ်… ရေကြောင်းလောက ဆိုတာ … ထင်ထားတာထက်အများကြီးကျယ်ပြန်ပါတယ်…
မြန်မာအများစုသိထားတဲ့ ရေကြောင်းလောကဆိုတာ .. သဘောင်္သား အမြင့်ဆုံး ကပ္ပတိန် .. Chief Engineer ဒီအထိပဲ ရှိမယ်လို့ ထင်ထားကြတယ်…. သဘောင်္သားဖြစ်တာနဲ့ ဒီလူတွေဟာ ရေထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်သွားရတော့မယ်… နိုင်ငံကို အကျိုးမပြုနိုင်ရှာတော့ဘူးလို့ ထင်ထားကြပါတယ်…… တကယ့် တကယ်တမ်းရေကြောင်းပညာရပ်ဟာ ဒီတင်ပဲဆုံးခန်းတိုင်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး …
အိန္ဒိယ လူမျိုး cadet တွေ အတော်များများ သဘောင်္လိုက်ကြတာဟာ တော်တန်ရုံ သဘောင်္သားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး .... သူတို့ တကယ့်ရည်မှန်းချက်ရုံးထိုင်ဖို့..... ကုန်းပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့ ... ရေကြောင်းပညာရပ်များကို ဆည်းပူးလေ့လာဖို့ ပါ… ဘယ်လိုရုံးထိုင်တဲ့အလုပ်လဲဆိုတော့ …. သဘောင်္လိုက်ပြီး Sea Service ယူပြီးတဲ့အခါ စာမေးပွဲမှန်မှန်ဖြေ.. Captain.. Chief Engineer ဖြစ်လာပြီးနောက်… သဘောင်္ရုံးတွေမှာ Marine Superintendent တွေ Technical Superintendent တွေဖြစ်ဖို့ ကို ရည်ရွယ်ပါတယ်… နောက်ပြီး Surveyor တွေ အဖြစ်လည်း အသက်မွေးနိုင်ပါသေးတယ်….. ဒါအပြင်ကို … အင်ဂျင်နီယာများဆိုလည်း .. ရေကြောင်း အင်ဂျင် ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာရှိပါတယ်…. အလုပ်များစွာ လျှောက်နိုင်ပါသေးတယ်…..ဒီတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး… ရေကြောင်းပညာနဲ့ တကွ ရေကြောင်းဥပဒေတွေကိုသာ တကယ်လေ့လာလိုက်စားမယ်ဆိုရင်.. ကမ္ဘာရေကြောင်း အဖွဲ့ အစည်းကြီးတွေ အထိ အလုပ်ဝင်လုပ်နိုင်ပါတယ်…. တကယ်တန်း သဘောင်္လိုက်နေတဲ့ အိန္ဒိယ အမျိုးသားတွေ အတော်များများကတော့ … ပညာရေးဘက်ကို အားမသန်တဲ့ အလုပ်ကြမ်းလုပ်မယ့် လူတွေ နဲ့ ပညာရေးမှာ သာမန်ကာရှန်ကာဖြစ်ထွန်းသူတွေကတော့ အရာရှိ အဖြစ်နဲ့ သဘောင်္ဆက်လိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်….
ကိုရီးယားတွေရော .. ထို့ အတူပါပဲ …နယ်ကလူတွေလောက်က သဘောင်္လိုက်ပြီး .... တကယ့်ပညာရည်ပြည့်ဝသူတွေက .. ပြည်တွင်းရေကြောင်းနဲ့ ပါတ်သက်တာတွေမှာ ရာထူးကြီးကြီးယူထားကြတာပါ..... အခြား သဘောင်္သားမွေးထုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ရုရှား.. ယူကရိန်း ခရိုအေးရှား ပိုလန်.. နော်ဝေ အစရှိတဲ့ နိုင်ငံက လူတွေကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ … ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းလောက တိုးတက်ဖို့ လိုပြီဆိုတာ .... သဘောင်္သားများ အခွင့်အရေးတန်းတူရဖို့ အပြင်..... ရေကြောင်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ တိုးတက်ပြီး ....လူ့အရင်းအမြစ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်တွေ ရကြဖို့ လိုအပ်နေတာ ကိုဆိုလိုချင်တာပါ..... ဒါမှလည်း ဥာဏ်ကြီးရှင်လေးတွေက ဥာဏ်ကြီးရှင်များနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ရေကြောင်းလောက ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ပါဝင်နိုင်မှာပါ.....
နောက်ပြီး အထက်မှာပြောခဲ့သလို.. မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီအတိုင်းမနေပါဘူး .. လမ်းတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းပွင့်လာမှာပါ… မြန်မာပြည်ဟာ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နိုင်ငံ … ကိုယ်ပိုင်ကမ်းရိုးတမ်းပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်…. အပျော်စီးသဘောင်္များ သွားလာနိုင်လောက်တဲ့ ... Cruise Ship တွေ ဆိုက်ကပ်နိုင်လောက်တဲ့ ပင်လယ်သဘာဝအလှများစွာလည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်.... ဒါကြောင့် တောင်… အမေရိကားလို သမုဒ္ဒရာနှစ်ခု ပိုင်ချင်တဲ့ တရုတ်အတွက် မဟာဗျူဟာမြောက်နိုင်ငံဖြစ်နေသေးတာပေါ့ ….. ဒီလို အရေးကြီးတဲ့ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိသော နိုင်ငံ အချက်အခြာကျသော နိုင်ငံ... ကမ်းရိုးတမ်းရှည်လျားတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခုအတွက်… ရေကြောင်းပညာကို ဒေါက်တာဘွဲ့အထိရပြီး နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုနိုင်သူတွေ.. ဥာဏ်ကြီးရှင်လေးတွေ မလိုအပ်တော့ဘူးတဲ့လား …
ခြောက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်လေးတွေ ဟာ ရေကြောင်းပညာ မသင်ကြားသင့်တော့ဘူးတဲ့လား
ယခုအချိန်ကတည်းက မွေးထုတ်ထားမှ....နောင်တစ်ချိန် အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ အခါ..... ဒီလူငယ်တွေ နေရာရတော့မှာပေါ့ခင်ဗျာ .....
ရေကြောင်းပညာရပ်ကို သဘောင်္သားလောက်မြင်တဲ့ မျက်စိခပ်တုံးတုံးလူတွေအတွက်တော့ … ဒီလောက်ပဲတွေးတတ်မှာပါပဲ …. အဓိကကတော့.. ကိုယ်မပိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို မဝေဖန်မိဖို့ လိုပါတယ်….
ကျွန်တော် အဓိက ပြောချင်တာက… ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ရေကြောင်းကြယ်ပွင့်တွေရဲ့ တက်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီတက်လမ်းကို ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းဝန်းဖွင့်ပေးကြရမယ်….. မြန်မာပြည်မှာ သဘောင်္သားလောကကြီးပပျောက်သွားဖို့ ထက်.. မြန်မာ့ရေကြောင်းပညာအဆင့်အတန်းနဲ့ ရေကြောင်းလောက အဆင့်အတန်းကို နိုင်ငံတကာတန်းဝင်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာပါ…. သဘောင်္သားအလုပ်သမားတွေ.. တခြားနိုင်ငံကသဘောင်္သားများလို အခွင့်အရေးတန်းတူရရေးဟာ အရေးကြီးသလို …ရေကြောင်းပညာတိုးတက်မြင့်မားရေးဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်…..
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရေကြောင်းပညာကို အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင် ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေရတဲ့အထိ သင်ကြားဖူးသူတွေ အင်မတန်နည်းနေပါသေးတယ်.. လက်တစ်ဘက်တောင်ပြည့်ပါ့မလားမသိပါဘူး … ဒီတော့ ဒီလို လူတော်နည်းနေတဲ့ ရေကြောင်းလောကအတွက်..ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ကြီးဖွင့်ပြီး ဥာဏ်ကြီးရှင်လေးတွေကို အမှတ်မြင့်မြင့်နဲ့ ခေါ်ထားတာဟာ အလကားမဟုတ်ဘူးလို့ ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်….
ဆယ်တန်းကို ခြောက်ဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကရော သာမန် သဘောင်္သားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပဲ ဆက်အသက်မွေးလိမ့်မယ်ထင်ပါသလား ….. သူသာ တကယ်ဥာဏ်ကြီးရှင်ဆိုရင်… တက်လမ်းတွေ ဖွင့်ထားပေးတာ နဲ့ အမျှ ဆက်တက်သွားမှာပါပဲ …. သူလှမ်းဖို့ ခြေလှမ်းတိုင်းအတွက်.. လှေကားထစ်တွေကို ထုဆစ်ထားဖို့ တော့လိုပါလိမ့်မယ်…. ဒါမှလည်း မြန်မာဥာဏ်ကြီးရှင်လေးတွေ ကမ္ဘာရေကြောင်းလောကမှာ ထွန်းတောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်……
တကယ်တော့ အလုပ်တစ်ခုရဲ့ ဘယ်နယ်ပယ်မှာ မဆို .. ဒီအတိုင်း ရပ်တန့်မနေပါဘူး … တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ထိုးထွက်ဖို့ ကြံဆကြတာပါပဲ ….. ကျွန်တော်တို့ ရေကြောင်းလောက မှာလည်း တက်စရာလမ်းကြောင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်…. ဆရာဝန်မှ.. အင်ဂျင်နီယာ မှ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်မှ မဟုတ်ပါဘူး …. ရေကြောင်းပညာရပ်ဟာလည်း တိုင်းပြည်တစ်ပြည် အတွက် တစ်ခန်းတကဏ္ဍအရေးပါတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုပါပဲ ….. ဆရာဝန်တွေပေါများနေလို့ လည်း တိုင်းပြည်မတိုးတက်ပါဘူး .. အင်ဂျင်နီယာတွေစုပြုံနေလို့လည်း တိုင်းပြည်တည်ဆောက်လို့ မရပါဘူး .. အဖက်ဖက် က ဘက်ညီမျှမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာပါ...
အခုအချိန်မှာ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနည်းနေသေးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးစ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ ရေကြောင်း နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ် အခွင့်အလမ်းတွေ နည်းပါးနေပါသေးတယ်…. အဓိကကတော့ နိုင်ငံတိုးတက်မှု… ပညာရေးတိုးတက်မှုနဲ့ … အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများမှုတွေ ကသာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်.. သဘောင်္သားဖြစ်သွားတာနဲ့ ဘ၀ဆုံးသွားပြီလို့ မတွက်လိုက်ကြပါနဲ့ ….. ရေထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့ လည်း မတွက်ဆပါနဲ့ ….. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ရေကြောင်းကြယ်ပွင့်တွေ အတွက်ထွန်းတောက်စရာလမ်းကြောင်းတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်…..
တိုင်းပြည်အခြေအနေကြောင့် ပင်လယ်ထဲမှာပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ရတဲ့ ဘ၀တွေကို … တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ … နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့ တကွ…ကျွန်တော်တို့ ရေကြောင်းလောကသားအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်…..
ဒီတော့ အဆိုတော် ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ကျွန်တော် မကန့်ကွက်ပါဘူး … အခုလောလော ဆယ်အထိတော့ သူ့အမြင်က မှန်နေသေးတာကိုး .. တကယ်တန်းဖြန့်ကြည့်ဖို့ တော့ လိုတာပေါ့လေ…. ကိုယ်မပိုင်တဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုကို အထင်သေးမိတာတော့ သူ့အမှားပေါ့လေ…..
ဒီတော့ .. ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်က ဥာဏ်ကြီးရှင်လေးတွေ ရော …. သိပ္ပံ (ကောလိပ်)မှာရှိနေတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေရော… ယခုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်တဲ့သဘောင်္ပေါ်က ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေ ရောကို ပြောပါရစေ… ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေဟာ ပင်လယ်ထဲမှာတင် ပြီးဆုံးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး … ဆက်တက်ကြရဦးမှာပါ…. ခရီးကတော့ ဖောက်ရဦးမှာမို့ ပင်ပန်းကောင်းပင်ပန်းပါ့မယ်…. ဒါပေမယ့် နောင်လာနောက်သားပေါင်းများစွာ အတွက်… မြန်မာ့ခေတ်သစ်ရေကြောင်းလောက ဟာ ကမ္ဘာအလယ်မှာ
မျက်နှာပန်းပွင့်ရဦးမှာပါ….. ဒီအတွက် ကိုယ်တွေဘက်က ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါမယ်…. ရေကြောင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေ… ဘာသာစကားတွေ …. ရေကြောင်းဥပဒေတွေ ကအစ လေ့လာထားကြရမယ်… ဒါမှ လည်း တကယ်တန်းမခွင့် အလမ်း ပေါ်လာတဲ့ အခါ..လက်မလွှတ်စတမ်းဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်….
အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ .. ကျွန်တော်တို့ ရေကြောင်းလောကအတွက်.. ခြောက်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ဥာဏ်ကြီးရှင်ပေါင်းများစွာလိုအပ်ပါတယ်…. ဒါမှလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ကိုယ့် ရေပိုင်နက်ကို ကိုယ်တိုင်ချယ်လှယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…. နိုင်ငံစီပွားရေးအတွက်လည်း အရေးပါတာပေါ့လေ…
နောက်တစ်ချက်…. ကိုယ်မပိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကို မဝေဖန်မိဖို့ လိုပါတယ်….. ကိုယ်သိသလောက်လေးနဲ့ ပြောတာကတော့ …. ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ကိုဆောင်းဦးလှိုင်ကို ၀ါးလုံးခေါင်းထဲလသာတယ်လို့ ပဲမြင်ပါတယ်..ဆရာဝန်ဖြစ်မှ အဆိုတော်ဖြစ်မှ တိုင်းပြည်အတွက်အမြတ်ဖြစ်တော့မှာတဲ့လား …..
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ .. ကျွန်တော်တို့ ရေကြောင်းလောကရဲ့ ကျယ်ပြန့်မှုကို ရေကြောင်းလောကသားတွေကိုယ်တိုင်သိနေဖို့လိုပါတယ်… ကိုယ်ဟာဘယ်အထိတက်လမ်းရှိတယ်.. ကိုယ်တွေဘယ်တံခါးကိုခေါက်ပြီး ဘယ်တံခါးကိုဖွင့်မှ ဘယ်ပန်းတိုင်ကိုရောက်မယ်… ဒါတွေသိထားကြရမယ.်…. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သဘောင်္သားလောက်ပဲသိပြီး ..နောင်လောက်နောက်သားတွေကို သဘောင်္သားအဖြစ်ပဲထားခဲ့ရင်… မြန်မာတွေသဘောင်္သားဘ၀နဲ့ပဲအဆုံးသတ်နေမှာပဲ …… ရေကြောင်းလောက တိုးတက်ရေးဆိုတာ ဒါကိုခေါ်ပါတယ်….
အဲ မင်းပြောတဲ့ အချိန်က ဘယ်တော့လဲလို့ တော့ ကျွန်တော့ကို မမေးပါနဲ့ … ဒါတွေအားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့ ပေါ်မှာပဲမှုတည်ပါတယ်…. ခရီးကို မြန်မြန်ရောက်ချင်ရင်များများ သွားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်….. မြန်မာ့ရေကြောင်းပညာရှင်ကြီးများ ဘက်ကလည်း နောင်လာနောက်သားများအတွက် ထိရောက်မယ့် သင်တန်းတွေ… ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေ.. ရေးသားထုတ်ဝေ သင်ကြားပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်…..
ဒီလိုသာ အဖက်ဖက်က ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပန်းမယ်ဆိုရင်… ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အနာဂါတ် ရေကြောင်းအိပ်မက်တွေဟာ .. ပင်လယ်နံ့သက်သက်တင်မဟုတ်ပဲ … ပညာနံ့တွေပါသင်းပျံ့လာမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်…. ဒါဟာ ကျွန်တော့ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..ကျွန်တော်ဟာ လူပြိန်းတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ .... လူပြိန်းစကားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်.... တကယ့်ပညာရှင်တွေက ပြောရင်တော့ ပိုထိရောက်တာပေါ့လေ.....
ဒါပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ အရာရာတိုင်းဟာ စိတ်ကူးသေးသေးလေးကပဲစတယ်လို့ မြင်ပါတယ်…ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းကြရမှာပါပဲ … ဒါမှ လည်း ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မြန်မာ့ရေကြောင်းကြယ်ပွင့်တွေ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တကယ်လင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ ..